Ulauncher iyo Synapse: 2 Launchers Best Application oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Kadib markii aan si ballaadhan uga hadlay mawduuca Deegaanka Desktop (DEs)ah Maareeyayaasha Daaqada (WMs) iyo Maareeyayaasha Bilaabidda (DMs), maanta waxaan u laabaneynaa dulucda ah Launchers Application for Linux, oo inta badan lagu yaqaan magacooda Ingiriisiga, sida rido. Qoraalkanna waan ka faalloon doonnaa Ulancher iyo Synapse.
Qaabkaas oo kale, si loo kabo wixii horay loo wadaagay Launchers Codsiga (Launchers) hore uga faallooday, sida Maskaxda, Albert iyo Kupfer, isla sanadkaas.
Kuwa waqtigaas, arki kari waayey ama arki waayey qoraalladeennii hore iyo kuwii ugu dambeeyay ee ku saabsan Maskaxda, Albert iyo Kupfer, waad heli kartaa iyaga, ka dib markaad akhrisid daabacaadan, adigoo gujinaya xiriiriyeyaasha soo socda:
Waxaa xusid mudan, kahor intaan si buuxda mawduuca loo guda galin, in Bilaabeyaasha Codsiga waa aalado ama qalab oo aan inta badan ku hirgalino Nidaamyadeena Howlgalka wax soo saarkeena kor u qaad, iyadoo la kordhinayo sahlanaanta iyo xawaaraha isticmaalka kumbuyuutarka si loo fuliyo falalka. Ficil inta badan waxtar badan leh, gaar ahaan goorta a Deegaanka Desktop (DEs) Waxaan isticmaalnaa ah Maamulaha Daaqada (WMs).
1 Ulauncher iyo Synapse: Launchers More for Linux
Ulauncher iyo Synapse: Launchers More for Linux
Sida laga soo xigtay bogga internetka ee Ulauncher on GitHub, waxaa lagu sifeeyaa:
"Ulauncher waa barnaamij si dhakhso leh u bilaabaya Linux. Waxay ku qoran tahay Python, iyadoo la adeegsanayo GTK +".
Inta u dhaxaysa muuqaalada taagan waxyaabaha soo socda ayaa istaaga:
Raadis madmadow: Marka la qorayo magaca codsi sanduuqa raadinta ee pop-up-ka, waan sameyn karnaa annaga oo aan wax badan ka welwelin higgaadinta, maxaa yeelay waxay isku dayi doontaa inay soo ogaato waxa run ahaan ugu dhow waxa aan doonayno inaan qorno si aan u raadino orod. Sidoo kale, xusuusnow xulashooyinkeenii hore (qaabab) oo si toos ah u xulo xulashada ugu fiican ee isticmaalaha.
Mawduucyada midabka gaarka ah: Waxay siisaa dadka isticmaala 4 mawduucyo la dhisay oo loogu talagalay qaabkeeda garaafyada. Si kastaba ha noqotee, waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto oo aad ku darto mawduuc midab gaar ah leh, sida waafaqsan nidaamka dukumiintiyadaada.
Tilmaamaha iyo kordhinta: Maaddaama ay tahay Launcher casri ah oo casri ah, waxay dooneysaa inay ku hagaajiso socodka shaqada iyada oo loo marayo marinno iyo ballaarinno la beddeli karo. U oggolow kuwa leh aqoonta lagama maarmaanka u ah inay abuuraan, laga soo gaabi karo raadinta webka ama qoraallo gaar ah, ama rakibidda dhinac saddexaad.
Daawaynta tusaha degdega ah: Ulauncher wuxuu oggol yahay hagidda faylasha iyo tusaha si fudud, kaliya adigoo riixaya furayaasha jilayaasha Nooca «~» o «/» in la bilaabo. Sidoo kale, adigoo riixaya iskudhafka furaha «Alt+Enter» o «Alt+Número» wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah u fuliso qaar ka mid ah xulashooyinka ka muuqda raadinta.
Adiga soo dejiso oo rakib waxaad toos ugu tagi kartaa taada qaybta download.
Sida laga soo xigtay bogga internetka ee Ku soo lifaaq Launchpad, waxaa lagu sifeeyaa:
"AMABilowga semantic ee ku qoran Vala oo loo isticmaali karo in lagu bilaabo codsiyada iyo sidoo kale in la helo oo lagu helo dukumiintiyada iyo faylasha la xiriira iyadoo la adeegsanayo mashiinka Zeitgeist".
Kuu ogolaanayaa inaad dhirtuba waxyaabaha dhowaan.
Waa mid aad u fudud oo dhakhso ah raadintaada.
Waxay leedahay taageero wanaagsan oo loogu talagalay isticmaalka fiilooyinka, tusaale ahaan Devhelp, Qaamuusyada iyo amarada degdegga ah ee Terminal.
Waxay bixisaa awood lagu fuliyo waxqabadyada waxtarka leh, sida, maareynta feylasha muusikada madaxa bannaan ama la xiriira ciyaaryahan, raadi faylasha Nidaamka Howlgalka (Meelaha, Dukumiintiyada, Sawirada, Fiidiyowga, Xiriirada) ku samee baaritaanka internetka DuckDuckGo, maaree kalfadhiyada Isticmaalaha Gnome (Xidho, xiro, dib u bilow), samee baaritaanno isku dhafan adoo adeegsanaya Zeitgeist si aad u hesho feylal la mid ah, oo laali oo ka fariiso kombiyuutarka adigoo isticmaalaya UPower, iyo waxyaabo kale.
Adiga soo dejiso oo rakib waxaad toos u aadi kartaa goobta Launchpad ama ku rakib bakhaarka 'Distro' adiga oo wata amar amar fudud, sidaan ku sameeyay, aniga MX Linux 19.2 Qaybinta:
Sida laga yaabo inaad hubisay, Ulauncher iyo Synapse waa 2 beddelaad barnaamij oo aad u fiican oo lagu beddelo Maskaxda, Albert iyo Kupfer. Waxay kaliya u hartay in la arko mid ka mid ah 5taan ama kuwa kale ee la heli karo ee ku habboon annaga Linux.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan labadan barnaamij ee ugu dambeeyay ee loo yaqaan 'launchers app' oo la yiraahdo «Ulauncher y Synapse», kuwaas oo kaabaya kuwii hore ee «Cerebro, Albert y Kupfer»; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ulauncher iyo Synapse: 2 Launchers Best Application oo loogu talagalay Linux
CRIU, oo ah nidaam lagu badbaadiyo laguna soo celiyo xaaladda geedi socodka Linux
Raspberry Pi 400, RPi oo ah qaab kumbuyuutar ah